तमुधिं यूकेको १७ औं ल्होछार मनाउने भव्य तयारी | We Nepali
तमुधिं यूकेको १७ औं ल्होछार मनाउने भव्य तयारी
२०७४ पुष ९ गते १३:२९
लन्डन । तमुधिं यूकेले १७ औं ल्होछार भव्य रुपमा मनाउने तयारी गरेको छ । आगामी ३० डिसेम्बर, २०१७ सांझ रेडिङस्थित रिभरमेड लिजर कम्प्लेक्समा कार्यक्रम हुंदैछ । चरा वर्गको विदाइ गर्दै कुकुर वर्गको स्वागत गरेर तमुहरुले ल्होछार मनाउंदैछन् ।
धार्मिक पूजासहित सांस्कृतिक कार्यक्रम गरि तमु जातीको मौलिक महान पर्व ल्होछार मनाइने तमुधिं यूकेले जनाएको छ । कार्यक्रम पूर्णरुपमा सांस्कृतिक माहोलमा सम्पन्न गर्न नेपालबाट गायक गायिका नरजंग गुरुङ र मेलिना राई २७ तारिख लन्डन उत्रंदै छन् भने हाल बेलायतमै रहेका कलाकारहरु बीमाकुमारी दुरा, धन गुरुङ, अश्मी गुरुङ र मन्जु बिकले पनि आफ्नो कला प्रस्तुत गर्नेछन् । नेपालबाट धर्म गुरुहरुसमेत आउंदैछन् ।
कार्यक्रम संयोजक तमुधिं यूके उपाध्यक्ष नन्दजंग गुरुङका अनुसार बिहान १० बजेदेखि ६ जना धर्म गुरुहरुबाट धार्मिक पूजा शुरु गरिनेछ भने सांझ सांस्कृतिक कार्यक्रम, डा. हर्क गुरुङ अवार्ड वितरण, तमुधिं यूकेको मुखपत्र फ्रेंसी विमोचन, राफल ड्र लगायत आकर्षण हुनेछन् । राफल ड्रमा एकतोला सुन र आइ प्याड पुरस्कार राखिएको छ ।
ल्होछारका अवसरमा यूके वा अन्य ठाउंबाट शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्ने तमु विद्यार्थीहरुलाई अभिनन्दन तथा प्रशंसा पत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । तमुधिं यूकेले यस वर्ष जिसिएसइ र ए लेभलमा राम्रो अंक ल्याइ उत्तिर्ण हुने तमु विद्यार्थीलाई डा. हर्क गुरुङ अवार्ड सम्मान गरिने जनाउंदै विवरण उपलव्ध गराइदिन अनुरोध गरिरहेको छ ।
तमुधिं यूके अध्यक्ष ज्ञाम गुरुङले खी ल्होछार (कुकुर वर्ग) को अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दै सबै तमुहरुलाई कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्नो महान पर्व उमंगका साथ मनाउन अपिल गरेका छन् । आगामी वर्ष नेतृत्व हस्तान्तरणमा बढि फोकस हुनुपर्ने भएकाले यसपटक ल्होछार बढि मनोरन्जनात्मक बनाउने तयारी गरिएको अध्यक्ष गुरुङले जनाए । ल्होछारमा उल्लेख्य सहभागिता गराउन बेलायतका विभिन्न शहरबाट बस रिजर्भ गरिएको छ ।
उक्त कार्यक्रम राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले उद्घाटन गर्नेछन् ।